Libinze ngoncedo kwizikolo isebe lezemidlalo nenkcubeko – Elitsha
26th June 2017 Chris GililiEast London, Ezemfundo, Iyavela 0 Xhosa
Umphathiswa wezemidlalo eMpuma Koloni uPemmy Majodina ngelixa enikeza iibhayisekile kubafundi besikolo samabanga aphakamileyo iLumko High School. Ifoto ithatyathwe ngu Chris Gilili
Nanjengokuba isaqhubeka imibhiyozo yenyanga yolutsha eMzantsi-Afrika isebe lezemidlalo nenkcubeko kwiphondo le Mpuma-Koloni lizeke emzekweni kumsitho ububanjelwe kwiholo yoluntu iGompo Community Hall nalapho belinikezela ngezipho kulutsha. Umphathiswa wezemidlalo nenkcubeko uPemmy Majodina, ehamba kunye nomphathiswa wesebe lezemfundo uMandla Makuphula bazise uncumo kwizikolo ezahlukeneyo zaseMonti.
Eliphulo nelixhaswe yinkampani yakwaMTN kunye neThembekile Mzantsi Foundation belinikezela ngezihlangu, iibhayisekile kunye namalaphu abantu ababhinqileyo abazikhusela ngawo xa besexesheni (sanitary towels). Oku bekuyi nxalenye yemibhiyozo yenyanga yolutsha.
Zizihlangu ezingaphaya kwamakhulu amabini ezinikelweyo xa zidibene. Iibhayisekile zona zinikwe abantwana abasuka kwizikolo ezikude kakhulu namakhaya abo.
Omnye oxhamleyo kwezi bhayisekile uMihle Nqweniso ongumfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo iLumko High School, uthe iyamonwabisa into yokufumana kwakhe ibhayisekile. “ Ndiyavuya kakhulu ukufumana le bhayisekile izakundinceda kakhulu nje ngomntu ohlala kude nesikolo kuba amaxesha amaninzi andifiki kwangexesha esikolweni kuba ndihamba ngenyawo. Kusebusika kunzima ukuvuka kwangethuba ukuleqa esikolweni,” utshilo.
Umphathiswa wezemfundo ephondweni uMandla Makuphula uthe: “ Udabi lwabafundi bangonyaka ka1976 yayikukulwa ingcinezelo kunye nokulwela ukufundiswa ngolwimi lwabo. Into efunekayo kubafundi banamhlanje kukuba bafunde iincwadi zabo baphumelele emagqabini.”
Enye into ayibetheleleyo umpathiswa kukuba ukufundisa umntana akupheleli esikolweni kuphela, nabazali banendima abafuneka beyidlali ekukhuthazeni abantwana.
Kulo nyaka kukhethwe iDuncan Village ukwenza le nkqubo ngenxa yokunyuka kwezinga lolwaphulo mthetho, intswela- ngqesho kunye nokukhulelwa kwamantombazana aselula ngeminyaka.
Also read: Abasebenzi bazezigaraji bazakuchaphazelwa sisiphakamiso semivuzo
idabi lwabafundi ka 1976
isebe lezemfundo nenkcubeko
Unikezelo ngezihlangu nebhayisekile